Maxay Yihiin Waxyaabaha Qarsoon ee Gmail? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 547
Mararka qaarkood waxaan dareemeynaa taas Waxaan saacado badan ku qaadaneynaa baaritaanka boostada iyo kaqeybgalka sanduuqa sanduuqa tan waxay ku dhacdaa meelaha kale iyo malaha Gmail. Si kastaba ha noqotee, Google waxay ka dhigtay dadka isticmaala inay ka faa'iideystaan ​​Gmail-ka iyaga oo adeegsanaya qalab lagu tirtirayo howlaha soo noqnoqda.
Waan ku tusi doonaa,
Maxay yihiin howlaha qarsoon ee Gmail.
U dir emaylkaaga "Hurdo": Shaqadani waxay kuu oggolaaneysaa inaad doorato emaylka kadibna aad ka saarto sanduuqa si aad ugu dhigto taariikh cusub, taasi waa, sanduuqa ayaa soo muuqan doona waqtiga la tilmaamay. Si tan loo sameeyo waa inaad isticmaashaa qalabka "Snooze" ama "Snooze".
Is-xusuusin: Gmail wuxuu fariisiyaa emayllada dusha sare ee sanduuqa si otomaatig ah haddii uusan dabagal la socon dhowr maalmood.
Ku abaabulo dhacdo Kalandarka ka socda Gmail: Kalandarka waa codsi Google ah, oo ku yaal dhinaca midig ee Gmail wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad jadwal sameyso dhacdo ama aad xusho xusuusin.
Urur faahfaahsan: Adeegso astaamo iyo shaandhooyin kuu oggolaanaya inaad abaabusho emayllada ka imanaya qof qaataha ah ama ku xusan erey gaar ah, tan si toos ah ayaa loo sameyn doonaa
Gmail ayaa saadaalisay waxaad qori doonto: Gmail waxay leedahay laba astaamood oo xariif ah oo kuu ogolaanaya inaad jumladaha dhameystirto kana jawaab celiso fariimaha kugu soo dhacaya. Si tan loo sameeyo waa inaad isticmaashaa "Smart Reply" ama "Smart Compose", shaqooyinka kaa badbaadinaya kumanaan iyo balaayiin astaamo aan qorneyn.
Cinwaanno emayl badan: Xaaladda aad rabto inaad ku haysato nooc kasta oo nooc ah cinwaankaaga, ku dar muddada ugu dambeysa cinwaanka emaylkaaga. Tusaale ahaan: [emailka waa la ilaaliyay] taasi [emailka waa la ilaaliyay]. O [emailka waa la ilaaliyay] ama wixii kala duwanaansho ah, ee Google u dirtay isla emails.
Gawaarida furayaasha: Waxay kuu ogolaaneysaa inaad waqti siiso oo aad si toos ah uhesho, si aad uhesho sanduuq pop-up ah waa inaad cadaadisaa? iyo liiska soo socda ayaa soo bixi doona:
Ctrl + Gal macnaheedu waa dir fariin.
Ctrl + Shift + b macnaheedu waa ku dar dadka qaata Bcc.
Ctrl + Shift + c waxaa loola jeedaa ku dar cc qaateyaasha.
Ctrl + waxaa loola jeedaa horay loogu sii daayo daaqadda xigta.
Toobiyeyaal horumarsan: Waxay leedahay shaqooyinka toobiyeyaasha shaqsi ahaaneed waxayna ku kala duwan yihiin markaad daaqad cusub furayso si aad u sameysid illaa aad wadahadalka ugu wareejiso qashinka.
Si aad u sameysatid qaababkan horumarsan waa inaad tagtaa
Shaxda dejinta geeska midig ee kore.
Helitaanka tooska ahs kiiboodhka
Liistada dejinta horumarsan:
/: calaamadee dul dhig sanduuqa raadinta
c: qor farriin cusub
d: farriin ku samee tab cusub
Ku kaydi fariimahaaga: Haddii aad rabto inaad kayd ka dhigto farriimahaaga, waa inaad ku biirisaa cinwaan emayl sameeya nuqul gurmad ah oo aad ku hagaajineyso koontadaada Gmail, tan si aan ugu diro emayllada sanduuqa ugu weyn.
Samee waxyaabaha soo socda:
Loo Gudbiyey y,
Kadib dib u dir nuqul ka mid ah warqadda soo socota.
Buuxi cinwaanka boostada.
1 Maxay yihiin howlaha qarsoon ee Gmail.
2 Si aad u sameysatid qaababkan horumarsan waa inaad tagtaa
3 Liistada dejinta horumarsan:
4 Samee waxyaabaha soo socda: